Ayikho i-Gauges kwi-777-200ER emva kokukhuphela ipakethe yokugqibela.
umbuzo Ayikho i-Gauges kwi-777-200ER emva kokukhuphela ipakethe yokugqibela.
iinyanga 1 kunyaka 4 eyadlulayo #794 by inkundla
Emva kokufaka i-7770200ER kwi-FSX yam, iigraji zonke zixakekile kwi-cockpit kunye ne-cockpit yangempela.
iinyanga 1 kunyaka 4 eyadlulayo #795 by Dariussssss
Impazamo eyaziwayo kakhulu. Kufuneka ufake i-Gauges ithuluzi lokubuyisela. Ungayifumana apha eRiooooo. Yisisitya ngoko, yonke into iyahamba lula.
Umsebenzisi (s) zilandelayo wathi Enkosi: inkundla
iinyanga 1 kunyaka 4 eyadlulayo #798 by inkundla
I-"Gauges Recovery Tool" ayizange incede kwingxaki. Ndicinga ukulayisha kwakhona i-777-200ER okanye mhlawumbi yonke i-FSX.
Ixesha ukwenza page: 0.348 imizuzwana